Ukubekwa ibala 'kwabachasene nemozulu' kunxulunyaniswa nethiyori yokutya iyelenqe, ipolitiki yephiko lasekunene kunye nemvakalelo yesisu: Martin Vrijland
Ibala 'lokuchasana nemozulu' linxulunyaniswa nethiyori zenqanawa, ipolitiki yephiko lasekunene kunye neemvakalelo zesisu
Kufakwe kuyo Ukupheliswa Ukupheliswa, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	1 Oktobha 2019	• 15 Comments
Ibali 'lokufudumala kwehlabathi' ngumdlalo owakheke ngononophelo apho bobabini abapolitiki, amajelo eendaba kunye nabantu abadumileyo badlala indima ekhokelayo. Ayinakuphikwa ukuba imithombo yeendaba kunye nezopolitiko zidibanise iintshukumo zepolitiki ezihambelana nelungelo lokuzincekisa 'ngabakhanyeli' kunye nethiyori yabaxhasi. Oku sikubiza ngokuba 'kukwakha uphawu' okanye 'uphawu'. Esi sisicwangciso sokuthengisa esidlalwa ngononophelo kunye nehlabathi jikelele.
Ilungelo (isiNgesi: 'iphiko lasekunene') lavunyelwa ukuba likhule ngenkxaso kwaye 'iphiko lasekunene' lalifanele ukunxulumana ne-stigmas ezimbalwa eziphindaphindayo. Iqela 'lephiko lasekunene' lihlanjelwe: ubuzwe (anti-globalisation), umfazi akanabuhlobo, uthandabuza, ukwala ubushushu behlabathi ("Abakhanyeli") kwaye babambelela kwiingcingane zethiyori. Oku kwaphunyezwa ngokukhula kwemithombo yeendaba efana ne-infowars (uAlex Jones), uDavid Icke kunye nabantu baseNetherlands abanjengoTierry Baudet noRobert Jensen. Ezo mithombo yeendaba manye ziye zathathelwa indawo kwiindawo zokuzenzela iyelenqe nangokuzivumela zivelise inkxaso evulekileyo nenomdla wobuzwe bukaTrump ubuzwe kunye nenkqubo yokulwa ubumbano lwehlabathi kunye nenkqubo yeBrexit, ukugqibile ukwakhiwa ngocoselelo kwephiko lamazwe aphesheya kwesokudla. Into ekusafuneka uyenzile kukuqhushumisa uphawu, umzekelo, intlekele yezoqoqosho kwaye ubhatala yonke into enxulumene nophawu lunye.
Nge-Greta Thunberg kunye nazo zonke iindidi zemibhiyozo, abantu abadala ngoku badlalwa ngokuziva ngokulula kwesisu. Uninzi lwabantu luvila kakhulu okanye luxakeke kakhulu 'liqela licinga' ukuba lifunde inkcazo-ntetho efana nale ingezantsi. "Ukubukela imovie iiyure ezimbini? Andiyenzi loo nto. Wonke umntu unokuphunga ukuba okusingqongileyo kuyonakaliswa kwaye nomhlaba uyaphakamaMsgstr ". Akukho mntu unokuyiphika into yokuba le meko iyonakaliswa, umzekelo, iiplasitiki emanzini, kodwa ke yena umntu ongahluthiyo ubambekile kuyo yonke into kwaye wonke umntu othatha inkathazo ukujonga ngaphaya kwamanani abebephambi kwamajelo osasazo. Nangona kunjalo, uninzi aluboni (okanye alunakuqonda nje) ukuba imithombo yeendaba inokukwazi ukuvelisa i-propaganda okanye ukukhohlisa izinto ukukhokelela kwihlabathi kwisahlulo sezemali (somntu oqhelekileyo) nenkqubo yolawulo yehlabathi .
Uluvo lokuba ezopolitiko kufuneka zisebenze luyityeshela into yokuba ezopolitiko zixhaswa kakhulu ngamashishini amakhulu. Amashishini angabavelisi kunye nabavelisi bazo zonke ezo plastiki kwiilwandlekazi zethu, umzekelo. Nangona kunjalo, akufuneki sidideke izinto. Ugxininiso kulwazelelo lwehlabathi lweerhafu ezongeziweyo lusekwe kwi-CO2 kumkhathi kunye nokushushubeza komhlaba. Kubonakala ngathi ingxaki yehlabathi iyasasazwa ukutyhalela phambili ngesisombululo esibonelela ngolawulo ngakumbi nangolawulo kubemi. Oko kubonakala njenge njongo yesiphelo efihliweyo.
Emva kwayo yonke loo nto, ukuphuculwa kunokwenzeka kuphela ukuba izinto ziya zisiba mbi. Ukuchaphazeleka kwengqondo kwenzeka xa usalathisa abantu okokuqala ekufuneka sazi ukuba ngaba ngokwenene kukho ukonakala kwemozulu. Abantu sele benamathele kwinkqubo yenkolelo. Luhlobo 'lweqela elicinga ngalo' okanye ukwala ukuthatha ingxaki yokufunda. Xa sele yamkelwe, kunzima ukwahlukana nayo. Oko kuthintela abantu abaninzi ukuba babukele nje intshayelelo efana nale ingezantsi. Siyabheja ukuba xa uthumela eli nqaku kubahlobo, baya kwala ukujonga intshayelelo kunye nokuhambisa amagxa akho emva koko bakubize ngokuba "ngommeli wemozulu" okanye "ucinga into yeqhinga lokucinga"? Oko kunokuthelekiswa noko wakubonayo ecaweni ngaphambili. Abantu bacinga nje ngento ethethwa ngumfundisi-ntsapho, kuba wayeyifundile. Ukusebenza ngokulula kukhonza abantu kunye neenkqubo zabo zenkolelo. Nabani na ophambukayo kule nkqubo yeenkolelo ugculelwa ngehlazo elithethwa kwakwicawa enye. (Bukela ingxelo kwaye ufunde ngakumbi phantsi kwevidiyo).
Abo bantu ngekhe babukele le ntetho ingentla Inokuchaphazela inkqubo yabo yokukholelwa kwaye awufuni loo nto. Kwi-psychology, le nto kuthiwa "kukungazi ngqondo." Okwangoku, le nkqubo yenkolelo iqiniswe ngumdlalo weemvakalelo wakutshanje ngeGreta Thunberg. Inenekazi elincinci elingaqhamukanga lizo naziphi na iimpikiswano ezingangqinelaniyo, kodwa ngokucacileyo lidlala iimvakalelo zabaphulaphuli kwisiseko seemvakalelo zesisu (kuba ayisiyonyani) ukuba imeko yezulu iyashushubeza kangangokuba izilwanyana ziyafa kwaye ulutsha alunakuba nalo ikamva. Kulula kakhulu nokusebenzisa amanani, njengoDavid Icke ngaphakathi le ntetho icacisa kakuhle. Kodwa okwangoku esele samkele inkqubo yenkolelo 'yotshintsho lwemozulu' ngeke kwaye kungayi kujonga imiboniso enjalo. Awufuni ukudideka zezi zibakala zibubudenge, kodwa ubambelele kuphela kwimvakalelo yokuba into kufuneka itshintshe. Ukuba abo bantu bafana, i-10 kwiminyaka kamva, abalubonanga utshintsho, kodwa amawaka euros engaphantsi ukuba achithwe ngonyaka kwaye inkululeko eninzi isusiwe, ke mhlawumbi ukuqonda kuya kuza ngaphambili, kodwa ke kuya kuba kudala kakhulu.
Into yokuba kukho ukudlala ngokwasemphefumlweni akunamsebenzi kwabo bantu babandakanyeka kwinkqubo 'yokufudumala kwehlabathi' okanye inkqubo yotshintsho lwemozulu. Nokuba ungakhankanya ukuba uSir David Attenborough kunye neqela lakhe labenzi beefilimu basebenzise ubuqhetseba obucacileyo kunye nenkohliso kuludwe lweencwadi zeNetflix 'Iplanethi yethu'. Ukuba ubuxoki be-1 buvela kolo chungechunge buveziwe, unokuzibuza ukuba ingakanani le fayile idityaniswe kunye ukunika umfanekiso ongeyonyani wenyani. Ngayiphi na imeko, kucacile ukuba ibali leal walusandula ukusuka ematyeni ngenxa yokulahleka komkhenkce wawububuxoki obucacileyo. Ukuba udlulisela eli nqaku ebantwini bakubiza ngokuba "ngumbhali wemozulu" okanye "ucinga into yeyelenqe," baya kuphinda bathathe inkcaso okanye bathethe izizathu ezingacacanga ezenziwe nguAttenborough neNetflix emva koko. Umsebenzi 'wokutshekisha iinyaniso' ubekeke kwindawo ethile kangangokuba kuphela abantu ababhinqileyo abakumgangatho ophakathi-abanobungane, iphiko lasekunene, ubuzwe, amadoda anengqondo yokuloba awakhathazeki kuvela thatha. Ngapha koko, ukukhangela inyani ngoku yinto eyenziwa ngabezindaba kunye nengcali yeFacebook. Umthengisi ohlola eyakhe inyama. Inkqubo eqhutywa yimithombo yeendaba efanayo yenze umsebenzi obalaseleyo!
Ayisathethi ngezibakala, kodwa malunga nentsomi ngokusebenzisa i-propaganda, ukusebenzisa abadlali abaziwayo abadlala kwakhona kwiimvakalelo zesisu. Umfanekiso kaHarrison Ford ovela kwimidlalo yakhe yefilm ngoku usetyenziselwa ukudlala umdlalo othembekileyo. Kutshanje usetyenziselwe ukusebenzisa imililo yeAmazon njengeyona emo yokuxhobisa intsha kwintetho angazibhalelanga yona. Ngokuqinisekileyo umdlali weqonga unokudlala iimvakalelo! Ungumlingisi wento. Sonke siyayazi ukuba iAmazon ibalulekile ekufunxeni i-CO2 (kodwa CO2 ngakumbi ikhulisa iAmazon), ngenxa yokuphilayo kunye nokwahluka komoya esiwuphefumlayo. U-Harrison Ford akanyanzelekanga ukuba asixelele loo nto. Yonke enye into ethethwa nguFord ayikho enye ngaphandle kweNeuro Linguistic Programming yabaphulaphuli enomfanekiso weAmazon "ngaphezulu kunangaphambili ' iyavutha. UFord ufuna ukuba uve ukuba kunjani xa igumbi endlwini yakho lisitsha kwaye udlala abaphulaphuli kulo. Uzobetha umfanekiso ukuba indlu yethu iphela 'ngumhlaba' ngomlilo nokuba i-1 yi-12. Nangona kunjalo, ukuba ufunda kwaye ubukele ividiyo ezantsi kweli nqaku, uya kufumanisa ukuba abantu baphinde badlalwa kwakhona ngomfanekiso obubuxoki wenyani ngeendaba zosasazo. Njengomntwana siyazi ukuba i-Sinterklaas ayikho ngexesha elinikiweyo, kodwa sisafuna ukuqhubeka nokubhiyozela.
Akathethi ukuba intetho kaHarrison Ford malunga neAmazon yenye enye inzame zokuhlulahlula 'iphiko lasekunene' langoku le-blackjack yento eneneni esekwe kumabango obuxoki. Imalunga nokunxibelelanisa ukucinga okukuko kwento yolo hlobo luchatshazelwe ngokucacileyo (oluzakube luvele ngokukhawuleza kunye nengxaki, ukuze babe zizityholo). U-Ford ngumdlali weqonga kwaye abalingisi baqeshwa kwaye bahlawulelwe indima yabo.
IAmazon khange iwazi ngomlilo ongaphezulu kwi-2019 kunakwiminyaka edlulileyo kwaye izinto ezibonakalayo ezisetyenzisiweyo zikhutshiwe. Kodwa umbuzo ngowokuba ngaba uyafuna ukuthatha ingxaki kwakhona ukuze ucofe le vidiyo okanye ngaba ubuyela umva kulonyeliso "Ewe, loo nto mayibe yenye ithiyori yelizeyoriMsgstr ". Ngamafutshane: umbuzo ngowokuba ngaba ulixhoba lenkqubo ye-sublime (ekwabizwa ngokuba yi- 'propaganda') kwaye uyabaleka emva kwamabango obuxoki. Ngaba unesibindi sokuzibuza lo mbuzo okanye ungambambela kwinkqubo yenkolelo yakho? Uye waba yinxalenye yecalization eyakhiwe ngokuchanekileyo eluntwini kwaye ukuba polarization ihlala ivelisa okwangoku (njengokudibanisa kunye nokucutha ibhetri). Unokuqikelela ukuba aya phi na amandla. Icebiso: U-Harrison Ford wayengomnye wezithethi kwiNgqungquthela yoRhulumente weHlabathi. Singamangqina kwiminyaka yobudala yobudala: Yahlula-hlula ulawule.
Abagxeki bakaGreta Thunberg ngaba baziphethe kakuhle ngokwesini ukuba bangaziphathi kakuhle izinto zobuntwana ': ukuphela kwesizathu
I-Max, Ingxaki, Isisombululo sichaze
Ubungqina bokuba amanye amajelo eendaba eendaba alawulwa nenkcaso
tags: i I, tshintsha. Umkhanyeli, mozulu, iqhinga, iingcinga zobuqhetseba, Abakhanyeli, eziziimbalasane, idibene, jikelele, Harisson Ford, mozulu, utshintsho lwemozulu, Abakhanyeli, khanyela, kwezopolitiko, kunene, iphiko lasekunene, Okwangoku, ukufudumala
1 Oktobha 2019 kwi-13: 46
Lixesha lokuba sithethe malunga neengozi ezinkulu zokwenyani endaweni yolu hlobo lweklabhu okanye i-rome psyops. Esingaboniyo ngokukhawuleza yeyona ngozi ihamba ngqo kubantu nakwindalo. Silindelwe yintlekele yendalo ukuba asithathi kwangoko.
1 Oktobha 2019 kwi-16: 48
Icacisa ngokwanda kwenani labemi eNgilane
1 Oktobha 2019 kwi-17: 03
Kubi kakhulu awuhlali kwisihloko
Ngaba lixesha lokuba sithethe ngeengozi zokwenyani? njengoko usitsho. Ndikholelwe ukuba eli nqaku nguHeer Vrijland lelinye lawona manqaku abaluleke kakhulu ngalo mzuzu, kodwa la macala.
Ukuba uqhubeka kwindawo yakhe ngaphezulu, umbhali uxubushe ngokungalunganga kwe5G, jonga eli khonkco, mhlawumbi uliphose mist ex (PORVH :) unokwazi, apha kwakhona:
1 Oktobha 2019 kwi-17: 53
Yintoni i-porvh?! Ingaphezulu ngoba umlingo uphazamisa izihlwele ngemicimbi yemozulu ngelixa imeko enye ikhathazwa zizixhobo ezihamba rhoqo. Akukho nto iphazamisayo eli nqaku ..
1 Oktobha 2019 kwi-18: 12
Ihlala isebenza ukuphazamisa abantu kwesinye isihloko, ukuze ingqondo ikhawuleze ilibala ukubaluleka kwayo.
Kubalulekile ukubona indlela esidlalwa ngayo ngabantu.
1 Oktobha 2019 kwi-19: 41
I-povrh ibingumntu ophawulayo ngaphambili, ucinga ukuba awuyonto, ayisebenzi.
Inqaku elingentla le-Heer Vrijland libalulekile kwimicimbi yangoku, kuba icacisa ngqo indawo esiqhutywa kuyo, sisilumkiso esingaqhelekanga.
Kwaye ngokuqinisekileyo iinkalo zakho zikwabalulekile kodwa zizizixhobo zamandla kuphela ezi
Ukusasaza (kukwabaluleke kakhulu)
1 Oktobha 2019 kwi-20: 34
Ewe ayizukukhunjulwa, kuba ulawulo lweengqondo lukhula ngemini kwaye emva koko iingqondo zethu ziya kuba sele efini ...
Kwaye i-5G kunye ne-Elon Musk Neuraling interface yomatshini wekhompyuter badlala indima ebalulekileyo apho.
1 Oktobha 2019 kwi-13: 59
Okwangoku, bonke abo bafundi basebenzela i-Xies ye-4G / 5G
1 Oktobha 2019 kwi-18: 49
NjengoTsunami, umyalezo uhlala usiza kuye wonke umntu,
I-UN, irabha ngaphakathi, icinezela kwaye iya kuyikhuphela phantsi emqaleni wakho.
Kwakhona namhlanje i-1 Oct emva kokuba i-Greta elizothe (ukuxhatshazwa kwabantwana) yenzeka ngexesha le-UN
(kwaye ngokuqinisekileyo kukho ukukhohlisa kwemozulu amashumi eminyaka, kuyinyani)
1 Oktobha 2019 kwi-19: 32
Isasazo kufuneka siqhubeke siphindaphindwe.
Inkcazo kwinqaku libonisa ukuba i-IPCC iyenza njani idatha.
Ngabantu abaninzi kuphela abangathathi ngxaki ukuyibona.
Sinexesha lokuhoya uninzi lwayo imizuzwana ye-8
UWilfred Bakker wabhala wathi:
4 Oktobha 2019 kwi-05: 37
Krelekrele !!! siza kutya iintsana ukusindisa imozulu!
Intombazana: “Isibhakabhaka siyawa kwiinyanga ezimbalwa. Kufuneka sitye iintsana. "
I-AOC: “Ewe, hayi, kulungile. Kodwa sine ngaphezulu kweenyanga ezimbalwa. "
4 Oktobha 2019 kwi-20: 49
Omnye umlingisi ohlawulelwe kakuhle okhuthaza "ubumbano lwehlabathi" kwaye ngaloo ndlela iphiramidi esekupheleni kwentetho ityhila iskripthi saseLuciferian.
Akukho mntu ufuna ungcoliseko. Wonke umntu ufuna iplanethi esempilweni, kodwa abatyali baphezulu kwimibutho kwaye abantu kufuneka bahlawule. Imifanekiso emininzi yongcoliseko zimveliso zeefilimu. Imalunga nengxaki, ukuSabela, ukuSombulula.
Fleur wabhala wathi:
8 Oktobha 2019 kwi-12: 42
Ndicinga ukuba inkolo yemozulu yehlabathi ngumbutho wedemon. Iinzululwazi ezinembono eyahlukileyo, ke, ezingalandeli inkolo yemozulu yomhlambi omkhulu, zisongelwa nje ...
Ugula kangakanani le nto uyifunayo kunye nehlelo elishushu lesimo sezulu ...!
Uqhushumbo oluGobileyo lweHlabathi liphela [ii-NL Subs]
8 Oktobha 2019 kwi-13: 28
Kukho izazinzulu ezihamba ngokuchasene nokuhamba kwaye zibonisa ukuba umhlaba awuyi kubashushu ubushushu usuka kwi-2020 kodwa uza kuphola kakhulu.
Silindele iminyaka yobudala bomkhenkce ...
Nditsho neNASA ibikezela ukuphola okuqinileyo komhlaba.
Indalo, ilanga elinamandla liyabetha libuye kwaye litshabalalise ubuxoki be-IPCC kwiminyaka ezayo ngokuphola okuqinileyo komhlaba .... kuhle!
Ukuze ingakhohliswa ngokupheleleyo, i-IPCC ngoku icocekile ngokwenza utshintsho oluncinci kodwa lubalulekile kwingxelo yabo.
8 Oktobha 2019 kwi-15: 26
Imijikelezo yeyamaxesha onke kwaye yenzeka naphi na kwindalo nakwimodeli zoqoqosho, ukutshintsha kwamaqondo obushushu emhlabeni kuhamba kunye nomsebenzi welanga (Isikhombisi sendawo yokukhanya kwelanga). Yiya ucacisa imeko eqhelekileyo ye-hysteric. Ngokwenyani sisondela kwindawo ebizwa ngokuba yiDalton ubuncinci (2020) elandelwa ubuncinci Maunder (iminyaka encinci yeqhwa), oku kwenzekile ngaphambili kwinkulungwane ye18. Le patheni iyaziphindaphinda njengomjikelezo wendalo. Ewe unokuyibona kwiimodeli ezisetyenziswayo ngoku yiklabhu yezimvume ze-rome, ezingahambeli mva kune1850 ..
Kukho i-ajenda eyimfihlo emva kwerhafu yemozulu yehlabathi kunye nokwehliswa kwabantu.
« Abagxeki bakaGreta Thunberg ngaba baziphethe kakuhle ngokwesini ukuba bangaziphathi kakuhle izinto zobuntwana ': ukuphela kwesizathu
Uhlobo 'lungelo' kunye nesicwangciso sobuchule sokuthengisa ngentengiso »
Iindwendwe ezipheleleyo: 13.086.867